कोरोनाले आतंक मच्चाईरहेका बेला चितवनमा स्क्रब टाइफसका एक विरामीको मृत्यु ! यो रोग मुसाको जुम्राले टोकेर स्क्रब टाइफस रोग लाग्छ । – live 60media
कोरोनाले आतंक मच्चाईरहेका बेला चितवनमा स्क्रब टाइफसका एक विरामीको मृत्यु ! यो रोग मुसाको जुम्राले टोकेर स्क्रब टाइफस रोग लाग्छ ।
← मंगलवार बिहान करिब ८ बजेतिर सडक भासिएको हो ।
सुन्दरहरैचाका ३ बर्षीय बालकको डुबेर मृत्यु, दुई जनाको सकुशल उद्धार →